Ny sidina UK dia avela miditra ao Gresy amin'ny tapaky ny volana Jolay
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Greece » Ny sidina UK dia avela miditra ao Gresy amin'ny tapaky ny volana Jolay
Rehefa manandrana mamonjy ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany i Gresy dia nanambara ny manampahefana grika androany fa havela hiditra ao amin'ny firenena manomboka ny 15 Jolay ny sidina ara-barotra avy any UK.
Ny fameperana ny sidina ara-barotra avy amin'ny fanjakana eropeana mankany amin'ny seranam-piaramanidina grika roa lehibe indrindra dia nesorina tamin'ny 15 jona, ary ho an'ny seranam-piaramanidina sisa tavela tamin'ny 1 jolay. Na izany aza, ny firenena dia nitandrina ny fandrarana ny mpikambana EU any Sweden ary ny mpikambana teo aloha Britain, ary koa ny maro firenena hafa manana lehibe Covid-19 caseloads.
"Miara-miasa amin'ny governemanta britanika ary manaraka ny torohevitry ny manam-pahaizana dia manambara ny famerenana ny sidina mivantana avy any United Kingdom mankany amin'ny seranam-piaramanidina rehetra ao amin'ny firenena manomboka ny 15 Jolay", hoy ny mpitondra tenin'ny governemanta grika Stelios Petsas.
Mbola eo am-pitandremana ny zava-misy ny governemanta miaraka amin'ny coronavirus any Suède. Nahavita namindra ny areti-mandringana 3,519 i Gresy hatramin'ny nitaterany ny tranga voalohany tamin'ny volana feb.